Very ny departemanta R&D an'ny HTC ho takalon'ny $ 1.100 miliara | Vaovao momba ny gadget
Google manao ny vaovao indray ary amin'ity indray mitoraka ity taorian'ny nifanarahana HTC hahazoana mifehy ny ampahany amin'ny fizarana finday mpanamboatra. Araka ny tadidinao tsara dia efa tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa no niresaka an'ity tranga ity, na dia tsy hatreto aza ny orinasan'ny motera fikarohana no nahazo ny fankatoavana ilaina rehetra hanatanterahana izany fisamborana izany.
Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy izany, ao amin'ny Google indray dia nifidy ny azy ireo izy ireo bilaogy hahatonga ny fampahalalana ho zava-dehibe toa an'ity tompon'andraikitra ity. Ao amin'ny lahatsoratra navoaka, ny mpanoratra tsy misy hafa tsy izy Rick osterloh, Filoha lefitra zon'ny Hardware ao amin'ny Google, dia miarahaba ireo mpiasa vaovao ao aminy. Amin'ity fotoana ity dia tokony homarihina fa tena Google dia nahazo ekipa olona manana fahaiza-manao 2.000 mahay avy amin'ny departemanta 'Powered by HTC', izay, ankoatry ny zavatra hafa, dia tompon'andraikitra mandraka androany amin'ny fampandrosoana ireo tetikasa samihafa toa ny finday Pixel an'ny Google.
1 Google dia mifidy ny lalana haingana ary handray ny departemanta fikarohana sy fampandrosoana an'ny HTC hamorona ny terminal manaraka
2 Na eo aza ny fivarotana ny departemantan'ny Fikarohana sy Fampandrosoana, HTC dia tsy hijanona amin'ny famokarana telefaona finday
Google dia mifidy ny lalana haingana ary handray ny departemanta fikarohana sy fampandrosoana an'ny HTC hamorona ny terminal manaraka
Mba hihatsara kely kokoa amin'ilay hevitra hoe nividy an'ity trano manokana ity tamin'ny HTC i Google ho takalon'ny 1.100 tapitrisa dolara, lazao izany 'Powered by HTC' dia tsy misy hafa fa ny sampana fikarohana sy fampandrosoana izay ananan'i HTC mandraka ankehitriny. Midika izany fa nividy mivantana tsy misy hafa noho ny departemanta miandraikitra ny fampivelarana ny teknolojia HTC vaovao rehetra i Google, ilay iray ihany izay niandraikitra hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay amin'ny famolavolana ny teknolojia rehetra misy amin'ny telefaona marika Taiwanese.
Amin'ity fomba tsotra ity, na dia lafo be aza, Google dia nanome toky fa tsy hiankina amin'ny orinasa hafa hamolavola ny findainy manokana sy ny fitaovana ho avy izay hamely ny tsena. Etsy ankilany, izy io koa dia niantoka ny fitohizan'ny taranaka vaovao ho an'ny Pixel hatramin'ny niantombohan'ny tetikasa nandritra ny taona maro tamin'ireo injeniera nampiasainy ary ho lasa ampahan'ny mpiasa be dia be ao aminy.
Toy ny azo vakiana amin'ny fidirana navoakan'i Rick osterloh:
Ireo mpiara-miasa vaovao ireo dia mitondra traikefa an-taonany maro hahatratrarana 'voankazo voalohany', indrindra eo amin'ny sehatry ny smartphone, izay misy ny fandefasana ny smartphone 3G voalohany tamin'ny taona 2005, ny telefaona finday voalohany tamin'ny taona 2007, ary ny telefaona unibody metaly voalohany tamin'ny taona 2013. Io ihany koa no fitaovana niarahanay niasa akaiky amin'ny fampandrosoana ny Pixel sy Pixel 2
Na eo aza ny fivarotana ny departemantan'ny Fikarohana sy Fampandrosoana, HTC dia tsy hijanona amin'ny famokarana telefaona finday
Amin'ny lafiny HTC, ny fivarotana ny sampam-pikarohana sy ny fampandrosoana dia tsy midika hoe handao ny tontolon'ny telefaona finday izy ireo, ny mifanohitra amin'izay, rehefa lasa ofisialy daholo ireo fampahalalana rehetra ireo. HTC dia namoaka fanambarana ofisialy nanambara fa hanohy hametraka terminal vaovao ny orinasa.
Raha mandinika izay rehetra lazain'ny mpandalina momba ny fividianana isika dia antenaina fa hitohy ao anatin'ny tsenan'ny telefaona finday ny HTC na dia marobe aza ny fandefasana hatramin'ny hanombohan'ny orinasa tsy mifantoka afa-tsy amin'ireo maodely mahasoa indrindra mandray anjara isan-taona izy ireo. Etsy ankilany, azo inoana kokoa fa ny HTC dia hanomboka hifantoka amin'ny karazana tsena hafa izay mari-pamantarana androany, toy ny fampivoarana ny solomaso vaovao nampitomboina na ny tsenan'ny Internet of Things.
Raha miverina amin'i Google aho, miaraka amin'ity fampiasam-bola ity dia mazava fa te hampifantoka ny ezak'izy ireo amin'ny sehatry ny tsena izay afaka mamela tombony maro toy ny fampivoarana sy fanamboarana ny fitaovanao manokana. Araka ny tadidinao, taona maro lasa izay dia nifantoka ara-bakiteny tamin'ny famelana ny orinasa hafa hanolo-tena hanamboatra ny vokariny izy ireo raha namorona rindrambaiko manokana, fomba iray izay, nandritra ny taona maro, dia nanova tanteraka ny filozofia sy ny fomba fampiharana ny mariho fa nampiditra andianà matihanina mahay be ao anaty ny mpiasa i Google amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » HTC dia namoy ny departemanta R&D ho takalon'ny $ 1.100 miliara
Ireo no premieres tonga amin'ny Netflix sy HBO amin'ny volana febroary 2018